लकडाउन, तनाव अनि कुखुराको मासु «
जेष्ठ २९, २०७८ शनिबार
लकडाउन, तनाव अनि कुखुराको मासु
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २८, २०७८ शुक्रबार
डा. सुस्मिता उपाध्याय
आज विभिन्न रोगको संक्रमण हुँदै संसारभर कोरोना विकराल महामारीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ, जसले विज्ञानलाई पछाडि धकेलिदिएको छ । प्रत्येक अस्पताल भरिएका छन् । अक्सिजन छैन । आईसीयू छैन । के छैन, कुन छैन, अब बाँच्ने कसरी ?
जे भए पनि सास छउन्जेल आस हुन्छ भन्ने उखानबाट प्रेरित हामीले हरेस खाएर हैन, होस र हौसलाले जीवन अगाडि बढाउनु छ । दोस्रो लकडाउन, त्यसमा पनि कडा भेरियन्ट । बाहिर हिँड्ने त अवस्था रहेन नै । यसले मानिसमा तनावको वातावरण सिर्जना भएको छ, जुन अकल्पनीय छ ।
गर्ने के त त्यसो भए भित्र बसेर ? धेरैले गर्दै आएका छन्, न्युज पढ्ने, टिभीमा न्युज हेर्ने, सिरियल, मुभी हेर्ने । त्यसले पनि वाक्कदिक्क भइयो । किनकि यो क्रम एक दिन होइन, दुई दिन होइन, महिनांै महिना भइयो । यसरी दिक्दारीमा बस्दा मानिसमा एन्जायटीलगायतका मानसिक रोगले नसताउला भन्न सकिन्न । त्यसकारण यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन धेरै उपायमध्ये एक हुनसक्छ, घरमा फुर्सदको समयमा मासुका थरीथरीका परिकार बनाई खानु र समय व्यवस्थित गर्नु ।
मासुमा भिटामिन ए, भिटामिन बी र भिटामिन डी, आइरन, जिंक, पोटासियमलगायत पौष्टिक तŒव हुन्छ । मासु खान जान्दा पोषण हो भने नजान्दा रोग । जथाभावी मासु खानु हुँदैन । मासुमा शरीरलाई आवश्यक प्रोटिनको मात्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्वस्थ मासु खाँदा शरीरमा स्फूर्ति आउँछ ।
मासु पकाउन, खान तथा स्टोर गर्न नजान्दा मासुले हाम्रो शरीरमा असर गर्न सक्छ । त्यसैले मासु किन्दा, पकाउँदा र खाँदा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा चिकित्सकीय सुझाव छ ।
मासुको मात्रा नमिल्दा मानिसहरू बिरामी हुने गर्छन् । धेरै मासु खाँदा कतिपय मानिस विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित बन्ने गरेका छन् । तर, के कारणले समस्या आइलाग्यो भनेर ख्याल गर्दैनन् । खानपिनमा सामान्य ध्यान नदिँदा दसैंको समयमा उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह र पेटजन्य समस्याका साथै झाडाबान्ता हुने, कब्जियत हुने, युरिक एसिड बढ्ने तथा ग्यास्ट्रिक हुन सक्छ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
रातो मासु पोलेर, धेरै भुटेर वा तारेर खाँदा क्यान्सरको खतरा बढ्न सक्छ । मासु खाँदा सावधानी अपनाएर खानुपर्छ । सकभर बासी नखाने, मासु मात्र नखाने, त्यसमा सागसब्जी र गेडागुडी पनि समावेश गर्ने गर्नुपर्छ ।
हामी घरमै बसेर पनि मासुका धेरै परिकार बनाउन सक्छौं । हामी मासुबाट तयार पार्न सकिने विभिन्न परिकारबारे कमै जानकार छौं । हामीले सधै पकाउँदै आएको खानेकुरालाई पनि अलिकति मेहनत र आइडिया लगायौं भने हाम्रो घरमै होटल वा रेस्टुराँमा उपलब्ध हुनेजस्तै परिकार पकाउन सकिन्छ ।
घरमा मासु मात्र भएर हुँदैन । विभिन्न परिकार बनाएर खान मन लाग्छ, तर सीप नहुँदा परिकार बनाउन नसकिएको पनि हुन सक्छ । विभिन्न परिकार बनाउन सीपको जरुरत पर्छ । तर, सीपको अभावमा धेरै परिकार भने बनाएर खाने गरिएको हुँदैन । मासुबाट विभिन्न परिकार बनाउन सकिन्छ ।
भैरव अर्यालको ‘आलु’ को सम्झना गर्दै आजकाल मानिसमा प्रयोग हुने बोइलर कुखुराको नै कुरा गरौं । चिकनबाट बन्ने विभिन्न परिकार खाऔं, जुन सर्वसुलभ रूपमा पाइन्छ, जुन हामीले आफैं तयार गरी खान सकिन्छ । आफ्ना हैसियतअनुसार थोरै धेरै परिकार वा केही दिन बिराएर लकडाउनमा आफैं वा परिवार वा आफन्तलाई मन खुस राखी धैर्य गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । साथसाथै दैनिक व्यायाम गरौं । स्वस्थ खाना खाऔं ।
यसै प्रसंगमा नेपालमा अन्य मुलुकजस्तै ब्रोइलरको मासु, अन्डाबाट के–कस्ता प्रकारका परिकार तयार गर्न सकिन्छ भनी पोल्टी व्यवसायका एक हस्ती, जो न्यू पचकन्या सप्लायर्स नामक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत हुन्, उनै बाबुराम थापाको सहयोगमा घरमै तयार पार्न सकिने मासुको परिकारहरू । परिकारका लागि विधि र सामग्री यस्तो छ :
कुखुराको हाड नभएको मासुमा अदुवा, लसुनको पेस्ट, खुर्सानीको धूलो, हरियो खुर्सानी पिसेको, नेपाली मसला, बेसार, तोरीको तेल, नुन स्वादअनुसार राखेर मोल्ने । भाँडोमा तेल तताएर मेथी अनि मोलेको चिकेनमा झानिदिने । झानिसकेपछि ५ देखि ७ डिग्री तापक्रम भएको फ्रिजमा आधा घण्टा राख्ने । फ्रिज छैन भने यत्तिकै राख्न पनि सकिन्छ । यसपछि झिर वा तारमा, जालीमा, हट प्लेटमा, ननस्टिक प्यानमा पोल्न सकिन्छ । यसरी पोलेको कुखुरा गोलभेँडाको अचारसँग खाँदा निकै स्वादिलो हुन्छ ।
दसैंमा पकाइने मासुको परिकारअन्तर्गत छोयला पनि एक हो । चिकेन, हाँस, बफ, मटनलगायतका सबैजसो मासुको छोयला बनाउन सकिन्छ । जुनसुकै मासु भए पनि छोयला बनाउने विधि भने एउटै रहेको हुन्छ ।
मासुलाई सफा गरेर चेप्टो र लामो आकारमा पिस बनाउने । नुन, बेसार राखेर राम्रोसँग मोल्ने । यसरी मोलेको मासुलाई आधा घण्टासम्म त्यसै छोपेर राख्ने । अब गोल, कोइला या ग्यासमा जाली राखेर मोलेको मासुलाई राम्रोसँग पाक्ने गरी पोल्ने । पोलेर तयार भएको मासुमा मरमसला, जिरा, रातो खुर्सानी, लसुन, अदुवा, धनियाँ, मरिच, टिमुर हालेर मज्जाले मोल्ने । तेल तताएर तयारी मासुलाई झान्ने । अन्त्यमा हरियो खुर्सानीको मसिनो टुक्रा र हरियो धनियाँ काटेर छर्कने । आफ्नो स्वादअनुसार कागतीको रस पनि मिसाउन सकिन्छ । घरमा फ्रिज छ भने करिब आधा घण्टा चिसोमा राख्ने । यसले गर्दा मासुमा मसला पूरै भिज्न पाउँछ छोयलाको मीठो स्वाद बन्छ ।
साँधेको कुखुराको मासु
कुखुराको मासुका पिस पानीमा उमाल्ने । करिब १० मिनेटजति उमालेपछि मासु पाक्छ । पाकेको मासु निकालेर एउटा भाँडोमा राख्ने । उमालेको पानी निकाल्नुपर्छ । मासुमा बेसार, नुन, काटेको लसुन, अदुवा र हरियो धनियाँ राख्ने र मज्जासँग मोल्ने । केही बेर यत्तिकै राख्ने । अर्को कुनै भाँडो चुलोमा बसालेर तोरीको तेल तताउने । तेल तातेपछि हरियो खुर्सानी, मेथी पड्काउने । तेलमा खुर्सानी र मेथी फुरेपछि मासु राखिएको भाँडोमा खन्याउने । फेरि मासुमा सबै मसला नभिजुन्जेल राम्रो गरी मोल्ने । केही बेर मोलेपछि मासु खानका लागि तयार हुन्छ ।
संकटमा परेका महिलालाई उद्यममा फर्काउन पुँजी र बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी
सिटिजन्स बैंकले सिर्जना फाइनान्स प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन
चौधरी फाउण्डेसनद्वारा वीर अस्पताललाई आईसियू वार्ड हस्तान्तरण
अग्नी ग्रुपद्वारा अस्पताललाई उपकरण हस्तान्तरण
आकस्मिक पोर्टेबल अक्सिजन ब्याग रिचार्जरमा
सुस्त गतिमा सुध्रँदो औद्योगिक वातावरण
धेरै वर्ष भयो, देशमा औद्योगिक वातावरण सुस्ताएको । औद्योगिक उत्पादनमा कमी हुँदा देशको व्यापारघाटा निकै
बजेट, तलबभत्ता, महँगी र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा बजेट ल्यायो । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट चुनाव
संकटका सारथि बन्दै पत्रकार
गएको हप्ता दिनअघि हामी नेपाल पत्रकार महासंघ, काभ्रे शाखाको कार्यालयमा पुग्दा अध्यक्ष बद्रीराज तिमल्सिना अलि
बन्दाबन्दी, नेपाली बजार र उपभोक्ता सचेतना
नेपालले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अर्थात् सन् १९९० देखि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको पाइन्छ । नेपालको बजार
सेयरबजार बन्न सक्छ एक खर्ब राजश्वको स्रोत
वर्षको १०० अर्ब राजश्व दिनसक्ने क्षमता देखिएको धितोपत्र बजारमा सरकारको ध्यान कहिल्यै पुगेन । चालू
कोष खारेजीको सकारात्मक कदम
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै जनबोलीमा सांसद् विकास कोष भनेर चिनिने